कास्कीको घान्द्रुक जाने योजना थियो ? मंसिरसम्म बन्द - Vishwanews.com
कास्कीको घान्द्रुक जाने योजना थियो ? मंसिरसम्म बन्द
काठमाडौं । तपाईले कास्कीको सुन्दर पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुक जाने योजना बनाउनु भएको थियो ? किनकी यसअघि हवाई तथा पर्यटन व्यवसायीले यस गाउँलाई लक्षित गरी प्याकेजहरु बनाएका थिए । तर, गाउँ स्वयमःले भने तत्काल पर्यटकलाई प्रवेश निषेध गरेको छ ।
कोरोना भाइरस कोभिड–१९) को संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै पर्यटन व्यवस्थापन समिति घान्द्रुकले मंसिरको पहिलो हप्तासम्म पर्यटकहरुलाई प्रवेश नदिने निर्णय गरेको हो । सोहीअनुसार ट्रर्किंग एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)ले समेत एजेन्सीहरुलाई सूचित गरेको छ ।
पर्यटन व्यवस्थापन समिति घान्द्रुकका अध्यक्ष किसम गुरूङले आगामी मंसिर पहिलो हप्तासम्म आन्तरिक र बाह्य सबै पर्यटकहरुलाई प्रवेश नगराउने निर्णय भएको जानकारी गराएका छन् । यसअवधिमा सबै होटल र लज बन्द रहने छन् ।
मंसिर पहिलो हप्तापछि पर्यटन व्यवस्थापन समिति घान्द्रुकको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिइने अध्यक्ष गुरुङलाई उदृत गर्दै टानले जानकारी गराएको छ ।